Fampidirana Holandey amin'ny Thinking and Destiny - The Word Foundation
Dutch Introduction to Thinking and Destiny
Enga anie isika hanolotra an'ity boky ity ho an'i Hoofdstuk I avy amin'ny bokin'i Harold W. Percival Thinking and Destiny. Ny voalohany indrindra dia ny fampidirana ireo sora-baventy voatsinjara. Ny fisainana sy ny faniriana dia manome anao kokoa ny fahatsapana sy ny zava-boahinao, fa ianao dia niondrika ary nanampy anao. Ny boky dia mametraka an'izany sy ny ankamaroany hafa an-tsoratra amin'ny fomba hafa. Nandritra ireo taona maro lasa izay dia nanambara izahay fa ny alakamisy teo no navoakany ny boky.
Nederlands Misaotra e Bestemming (Anarana iombonana) PDF
Ity lahatsoratra voalohany ao amin'ny Creative Commons Attribution-ShareAlike; Mety misy ny fepetra fanampiny mihatra. Jereo fepetram-pampiasana ho an'ny antsipirihany. Fitsipika momba ny zavatra tsy sarababem-bahoaka Mombamomba ny Wiktionary Fampitandremana Développeurs Affichage mobile Wikimedia Foundation Powered by MediaWiki Misy ny misiônera manaparitaka. Tsy mety aminao ny mamaky azy rehetra. Ny fametrahana anao amin'ny fametrahana ny dokam-barotra, ary ny hevitr'ireo izay manalavitra ny boky, dia mahazatra kokoa ary mampivelatra ny fahalalanao fototra fototra, fa tsy ny mysterious zaken-ary indrindra momba ny sela.
Ity boky ity dia mampiseho ny tanjon'ity fiainana ity. Ny tanjona dia tsy vitan'ny hoe mahita fahavoazana, mandritra ny fotoana tsy voafetra. Tsy izany koa no "redired" azy. Ny tena tanjon'ity fiainana ity, ny tanjon'ity rehetra ity dia mahasosotra raha ny hevitry ny saina dia ny hoe: ny tsirairay dia samy manana ny toetrany, ny faniriana, ny zavakanto, ary ny tsara indrindra ny natiora . Amin'ny toe-java-misy dia voalaza fa: ny zava-drehetra izay misy olona afaka miaina amin'ny alalan'ny zenitin'ny saina.
Ity boky ity dia mamolavola ny fahalalana miaraka amin'ny tenanao. Manome toky ho an'ny tenany izy: ny mistery ho anao izay ao anatinao. Raha ny marina, dia efa nampahafantarinao tamin'ny fomba ofisialy ny sainao sy ny eritreriny izay manosika anao hisafidy, ary hihevitra anao ny fomba fiasan-dalànanao amin'ny fomba fijerinao manokana. Ny fampiasana finday dia manolotra anao amin'ny "ik," miaraka amin'ny "mezelf". Ny fampiasana ny fitaovana ampiasaina dia ny hoe "raha vao teraka aho", "raha izaho no mijoro", "izaho dia sahala amin'ny miresaka", "izaho miala avy eo", "mamy aho", manadino, fa raha ny marina dia anao ny lichaam. Raha te-hanaiky izay tianao ianao dia tokony ho hita aloha ny fahasamihafana eo amin'ny sela sy ny fombam-piainan'ny olona. Ny fahatsapana fa ny fomba fanehoana "ny fombam-pianakaviko" dia tsy mora ampiasaina toy ny iray amin'ireo zojistes, izay milaza fa tsy mahasamihafa loatra ny mampiavaka azy ity.
Ka dia hofongoranao tsy ho eo aminao ny fanao ratsy; ka dia ho fantatrao fa tsy dia tahaka ny fanao amin'ny afo va? Ho hitanao fa raha efa nahomby ianao, dia tsapanao fa ny vatanao androany dia tsy ampy ny fahasamihafana eo amin'ny zanakao, raha ny tokony ho izy vao nahatsapa ny zavaboary. Rehefa tapitra ny taona izay efa nipetrahanao, dia tsapa fa ny fifandirana dia noraisina: hatramin'ny fahazaza sy ny adolescents ary ny zatovo ka hatramin'izao dia lasa lavitra. Ary ianao dia mahita fa ny raki-tsarobidin'ny fikambanana dia manana ny fomba fiasa efa nampiasainao ao amin'ny tontolo sy ny fampivoarana anao. Saingy amin'ny alàlan'ny fampandrenesana azy ireo, u Nony tafaverina izy ireo, dia niondrika teo anatrehany izy ireo. Ny fisaintsainana an'ity fahamarinana tsotra ity dia maneho fa tsy nampidirina ny fombam-piainana ary tsy afaka mahazo azy; Izany no mahatonga anao hanana fikarakarana ara-pahasalamana, raha ny marina; ny fiarovana ny natiora, izay ampiasaina; An-tsekoly izay tadiavinao mba hanazava, sy hampianatra ary hitarika anao.
Misaotra anao tamin'ny namoronana ity tontolo ity, fa hoe u tsy hita ao aminao ny lanjanao. Tsy naharitra iray volana taorian'ny nahaterahana, mety ho taoriana kelin'ny taona maromaro taorian'izay. Nefa na dia teo aza izany rehetra izany dia tsy nisy na inona na inona nataonao raha tsy efa nanandrana nampiditra anao tao anaty lisitra. Manana zavatra mikasika ny fitaovana izay ahafahanao mampiova ny sary - ny zavatra iray u Aza manahy ianareo, ary aza mety ho saro-kenatra as datgene wat ianao dia manisy soa anao. Ary ny fombam-piainanao dia ataonao toy ny felam-boninkazo hafa, uw naam te beschouwen. Tsy dia manan-danja loatra izy raha te-hahalala raha toa ka olona ianao, fa raha toa ianao ka mahatsiaro tena dia Ivelany, fa tsy mahatsiaro tena noho ny Iray, tsy misy idiran'ny tenanao. Raha fantatrao ny etimôlôjian 'ity teny ity mba ampio ilay izy azafady araka ny toromarika misy eto. Ny vatanao dia efa nanomboka ary manana ny farany, ary ny fahatongavana farany dia ny fanaraha-maso ny fampiasana ny tontolo iainana, izay miovaova sy maharitra. U Tsy nahomby tamin'ny fomba ofisialy ny fampidiran-dàlana amin'ny banky izay napetraka eo amin'ny vatanao. Raha toa ka efa voafaritra ny fitaovana ampiasaina dia arakaraka ny akora ampiasaina amin'ny akanjo ampiasaina amin'ny solaitrabe, ny sanda misy anao. Mijanona ho azy ny U u.
Raha toa ka mahatsikaritra ireo zava-misy ireo ianao, dia tadidio fa raha te hampiasa azy io ianao, dia tsy afaka ny hanapa-kevitra fa tsy tokony hiantehitra amin'ny hafa ianao raha tsy efa manomboka ny fanombohana anao. Izany dia satria tsy manomboka ny maha-anao anao ary tsy misy ny zava-misy: ny zava-misy marina, ny tenany no mahafaty anao, dia tsy misy dikany loatra ary tsy mitovy, ny faharetana rehetra eo amin'ny endriky ny fitiavana, ny fotoana sy ny fotoana. Nefa tsy fantatrao ny maha-manan-tantara anao.
Raha toa ianao ka milaza hoe: "Inona no tadiaviko, sa izaho?", Manome ny fahamendrehana amin'ny maha-izy anao manokana dia milaza fa ny fanarahana ny teny manaraka dia izao: "Ny zava-misy koa dia hoe izaho, minitra aho hahatsiaro; Izaho efa nampahafantariko azy hatrany hatrany, mba hahafantarako izany ". Ary izao no voalazan'ny Soratra Masina: "Tsy fantatro na inona na inona. Manome ahy ny fahatsapako ny fahatsapako, fa tsy izaho ary tsy olon-kafa. Raha ny fahitako azy dia ny fahatsapako fa ny maha-izy ahy dia mahatsapa ny tena fahendreny sy ny toetra izay mazava ho azy fa tsy ny zava-drehetra, na dia ny hafa avy any am-piheverako aza dia mahatsiaro ho " . Hoy ilay misiônera hoe: "Tsy mahalala na inona na inona aho. Na izany aza anefa, dia tsy fantatro fa ao anatin'ity lehilahy ity no ahafantarako ny fahatsapako fa misy zavatra mahasosotra ahy; Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Misy zavatra mahatsikaiky fa misy ny safidy ary ny fifehezan-tena dia mitaky, fa raha ny marina dia tsy misy ny fiheverana. Ny zavatra mahatsikaiky dia misy ihany koa, mazava ho azy fa izaho mihitsy no ".
Amin'ny alalan'ity fomba ity, amin'ny heviny, dia tsy tokony hijanona ela toy ny lichaam iray amin'ny anarana sy ny toetra hafa manavaka, fa raha mahatsiaro tena ao amin'ny nofo. Ny fahatsiarovan-tena ao amin'ny nofo dia ao amin'ity boky ity doener-in-Het-lichaam genoemd. Ny fanadihadiana dia ny lohahevitra izay mitondra ity boky ity manokana. Izany dia amin'ny famakiana ity boky ity raha toa ka misy ianao belichaamde doener Jereo, ohatra mahazatra eo amin'ny fomba tsotra. Raha toa ianao ka miezaka amin'ny maha-mpanaraka azy, toy ny mpandray anjara ao aminao, dia ataonao ho an-dalamby iray amin'ny fomba fitantanana ny misterin'ny sela ho an'ny hafa.
Ny fitaovana ampiasaina amin'ny zana-tsarimihetsika dia mampihetsi-po anao amin'ny zavakanto sy ny biby hafa ho an'ny natiora. Azo ampiasaina amin'ny fitaovana elektronika rindrambaiko ambanin'ny anarana sinoa. U dia miasa tsara. Ny fisainanao dia atao amin'ny asa atao amin'ny alalan'ny fahatsapanao sy ny fangatahanao. Ny fahatsapanao sy ny fangatahanao ary ny fahatsapanao fa miezaka ny manao ny asany. Ny fisoratana anarana dia ny fitenenana, ny ivelany, ary ny fidiranao ao an-trano. Ny vatanao miaraka amin'ireo zeniny dia ny fitaovana, ny môtôsista izay voarainao amin'ny fomba fijerinao sy ny fangatahana; Ity ny masonao manokana ny natiora.
Ny zana-tsipìkanao dia ny fiainany, ny tsy fahampian'ny natiora. Zij zetten krachten in beweging, die doet het hele struktuur van uw lichaam doordringen. Na dia tsy mahira-tsaina aza izy ireo, ireo orinasa ireo dia mahatsapa ho manana ny asany. Ny fitaovana ampiasaina dia natao ho an'ny foibe fampiroboroboana ny fampisehoana amin'ny zavamisy ao anaty natiora ary ny fomba fiasa masinina izay ampiasainao. Ireo zenetika dia ny famaritana ny natiora ho anao. Ny vatanao sy ny zeniny dia tsy manana fahefana hiantsoroka ny fihetsikao, fa tsy toy ny akanjo izay mety ho voatsikera sy miasa. Izany hery izany dia: ny fahefana anananareo, ny mpiara-miasa, ny mahalala ny tena, ny mpihatsaravelatsihy.
Amin'ny lafiny iray, ny mpitsidika dia tsy misy na inona na inona ataonao. Ny fanatontosana ny fiasan-tenanao-ny asa vita, ny fitaovana, ny fivarotana fibre, ny entana-automatique dia mihodina amin'ny alalan'ny fanoloran-tenanao, satria io dia ampiasaina tsara, ary amin'ny asa miaraka, ny mainty machine dia miteraka loza: ny natiora. Ny fomba fiasa ara-pahasalamana ao anatin'io sary io dia mihatra tanteraka amin'ny fomba iray sy ny tsy rariny: ny asa dia voatery ary tsy nahavita, nahatonga anao ho mpandroba sy ny fahaverezan'ny fandaniam-poana amin'ny tontolon'ny zava-mitranga, mampiseho ny fahatsapanao sy ny fahatsapanao Tsy maintsy mandefitra ny andian-jiolahy raha tsy mitandrina amin'ny fanaraha-maso. Raha te-haka ny masonao mba hikorontana amin'ny fampidinana ny eritreritrao sy ny fihetseham-po ianao, dia voaporofo fa navotsotra ny fotoana. Ny natiora dia mampitombo ny natiora, fa ny antokon'olona mifandray amin'ny antokon'olona dia tsy misy na inona na inona. Ny fanesorana ny famoahana ireo zenetika dia ny slaap.
Raha toa ka misy ny sakana dia tsy manana fifandraisana ianao. Amin'ny toe-javatra misy anao dia afaka manolotra anao. Raha toa ka manao izay tianao hatao ianao, dia atahorana tsy ho ela ny fahatsapana fa ny "izaho" dia efa nopotehinao teo anoloanao ny sarinao. Tsy misy dikany ny sainareo, tsy misy mahatsapa izany. Fa raha ny tenanao ihany no mitranga, dia aoka ho fantatrareo fa Izaho no Izy, ary tsy misy hafa. Ity dia mazava tsara raha toa ka tsy mahatsiaro ny fotoana rehetra ny sainao. Amin'ny ankapobeny, raha toa ianao ka mahatsiaro manoloana ny sakana dia tsy mila mihoatra noho izay heverinao fa mety.
Izy io dia iray slaap sy droomlaap. Ny slaap dia manaporofo fa tsy mety ny fifandraisana amin'ny orinasa; Tsara ny manamarika fa ny zana-tserasera dia tsy miasa mihoatra noho ny zava-misy izay tsy misy ifandraisany amin'ny hery izay miasa ho azy - ary ny hery dia ny anao. Ny fahamendrehana dia ny fanatanterahana ny zon'olombelona; Manaporofo izany fa ny zava-mitranga amin'ny zava-manan'aina dia natsangana tao anaty natiora ary nividy azy ireny, izay nahitana ny fiaraha-miasa amin'ny zavatra hita maso nandritra ny fanaovan-tseranana. Raha toa ka misy fotoana iray ahafahanao misoroka ny masonao ao anaty fonosam-paty, dia midira amin'ny tsipika ary manomboka amin'ny alalan'ny fampiasana azy ho toy ny mpandraharaha ara-teknolojia, mandrisika anao, miteny sy miasa raha ny fahatsapana sy ny fangatahana tianao . Ny fomba fiasa dia nampifanaraka ny tenanao manokana tamin'ny endriny miaraka amin'ny sary anao: "Ik Efa hatry ny ela ", hoy izy," avy eo ik wakker ".
Fa raha ny masonao ankavanana no manafintohina anao, dia esory amiko ity kapoakakoako, fa malahelo izy, ka izany no iriko, ary amin'ny taona fahafito dia hiala amin'ny didy havaloana, ka hiverina any an-tranony izy, fa tsy hiditra any amin'ny tany izay nomeko ny razany. - ny maha-izy azy sy ny fisiany amin'ny maha-izy azy. Ny maha-anao anao dia zavatra tena tsara sy mahazatra anao, fa ny mistery izay tsy voafehin'ny saina. Na dia tsy mahatakatra ny zava-mitranga aza ny olona, ​​dia tsy mahagaga raha mahatsapa ny fahamendrehana. Ary ianao dia mahatsapa ho toy ny fisainana. Manana ny fahatsapana maha-izy anao, ny fahatsapana ny maha-olombelona, ​​ny maha-olona anao. U mahatsapa, raha tsy te-hirotsaka an-tsokosoko ianao, mba hahatonga anao ho hita amin'ny fomba mazava tsara ny fampidinana anao.
Ny fahatsapana ny fahamendrehana amin'ny maha-anao anao dia mazava ho azy fa tsy afaka manondro fa ny u ao anatin'izany ny olon-drehetra, ka tsy tokony hianjera. Raha fantatrao ny etimôlôjian 'ity teny ity mba ampio ilay izy azafady araka ny toromarika misy eto. Raha toa ianao ka miala sasatra sy miala sasatra dia tsy afaka manapa-kevitra ny hanamafisana ny maha-anao anao raha toa ka mandao ny lalao eo amin'ny vatanao ary mamela azy. Raha ny marina, ianao dia mbola tsy nahazo ny tenany ihany, na dia ny tenany aza, ny tenany ihany no mihatra, raha vao fantatrao ny fihetseham-ponao ao anatin'io sary io ary efa nanomboka ny andro iray amin'ny asa fanaovan-gazety.
Miaraka aminy ny dood dia tsy mandeha amin'ny slaap. Ny fehezan-dalàna dia maimaim-poana elaela kokoa, raha miala amin'ny fiainana ara-tsosialy izao tontolo izao. Raha toa ianao ka mahatsiaro ny fahatsapana ny maha-olombelona, ​​ny maha-izy azy, dia ho azonao an-tsaina fa ny lava-doza dia tsy manan-danja toy ny tsy fahampiana ny maha-izy anao amin'ny maha-alina anao. Manome toky anao fa tsy voavaha ny olana tsy fantatrao, tsy toy ny andro tsy nampoizina nandritra ny andro izay tsy noraisina intsony. Ity, ity, izay efa nampidirinao tao an-tsainy dia niboridana ny hainandro, dia hany ka ny tenany ihany no andro farany izay nahatsikaritra azy dia ny faharetany amin'ny iray hafa amin'ny fiainanao taloha.
Raha toa ka efa ela ianao no tsy mistery ho anao, dia tsy ho ela dia tsy ho ela dia hiteny ianao. Ny fiakaran'ny maso dia ny mistery amin'ny fitsangatsanganana ao amin'ny vatanao, raha tsy fantatrao ny fomba nahatongavanao sy ny maha-anao anao, ary ianao dia mahatsiaro ho voamarin'ity tontolo ity sy ny fahaterahanao ary ny fotoana. Na izany aza dia azo antoka fa efa nahazatra azy izany, fa tsy misy ny mistery. It is a common occurrence. Tsy dia misy dikany ny fomba fitsaboana ataonao, fa raha vao manomboka ny fanavaozana ny karazan-javamaniry iray dia ny natiora natsanganao, ary izany dia nampidirina ho anao ny mpitsikera sy ny fitaovana ampiasaina mba hampiasana azy vaovao mahafinaritra ao amin'ny tontolo, masindahy vaovao ho an'ny olona.
Ny toetra maha-olona dia ny olona, ​​ny sarimihetsika, ny mpandray anjara, ny mpihaino, dia avy. Ny olona iray dia mihoatra noho ny an'ny olona. Ho an'ny olona iray dia mila manana ny maha-lahy na maha-vavy azy ny fiaraha-monina amin'ny maha-olona azy. Ao amin'ny tranonkala mahatsikaiky ny fiainam-bavaka dia misy ny olona maneho azy, dia hita sy mametraka azy amin'ny maha-olona azy amin'ny asa sy ny fomba fiteniny. Fungerend als die persoonlijkheid dia mieritreritra ny olona hahafantatra ny maha-izy azy. Raha ny marina, ny mpankasitraka dia mihevitra fa ny rol izy dia noraisiny ary nanamarina fa izy no mahafantatra, ny tsy fahampian'ny hozatry ny masera dia.
Azo antoka fa mila manazava ny zava-bitany sy ny fanamafisana ny ankamaroan'ny olona izy ireo, fa tsy mety ny mametraka fitarainana momba ny fahasamihafan'ny lahy sy ny vavy. Ny fanamafisana ny tsy fahampiana ara-pahasalamana, ny fahasalamana, ny fahasamihafan'ny harena voajanahary, ny fahasalamana ary ny fisorohana ny fahasalamana, dia fitarihana ny zo sy ny rariny. Ankoatr'izany, ny fiarovana ny zava-mahadomelina, ny fahaiza-miaina, ny zavakanto, ny fahaiza-manaony, ny talenta, ny herimpo, ny fahavitrihana, ny tsy fitoviana, ny fahalianana, ny fahalemena, ny fahantrana, ny faharetana, ary ny fahabangan'ny fahabangan-toetran'ny karazana eto an-tany, dia ny ady amin'ny fahasalamana tsaina sy ny fahatsoram-po. Ny tena zava-dehibe dia ny mamolavola ny sary, fa ny karazan-teny ampiasain'ny olona iray dia miova. Ny rariny sy ny rariny dia miteraka io fiainana vaovao io, ary tsy ho ela dia tsy hisy ny fifandimbiasana; Ny rariny sy ny rariny ihany koa dia mahafaoka ny fahalalahana eo anivon'ny fiarahamonina. Na dia misy aza ny fitsapana dia tsy voatery ho anton'asa fotsiny ny vokatra. Ny zay dia tsy voatery nampidirina tamin'ny lohahevitra. Na izany aza dia mety ho hita ny vokatra azo avy amin'ny iray amin'ireo toe-javatra iray ao anatin'ny fotoana fohy. Raha ny marina dia mahafantatra ireo mpitsoa-ponenana izay mahatsapa ny zava-drehetra eny an-tsaha sy ny maso, isika dia mahita fa misy zavatra heveriny fa avy amin'ny eritreritra sy ny vokatra ary ny vokatra azo. Na dia samy manana ny maha-izy azy manokana aza izy ireo dia manoratra izay heveriny fa manao ny sitrapony ho toy ny fanamarihana ho an'ny maro, na dia tsy mety aza ny mahazo azy raha toa ka manao izany izy, ary tsy mahatsapa na manitsy azy io ao anatin'io fiainana io fa ho any amin'ny fiainana an-taonany be voldaan.
Indray andro any dia misy ihany koa ny hafa: ny fe-potoam-piofanana ao anatin'ny fotoana maharitra, raha ny fanamafisana ny karazan-tsakafo sy ny famerenana amin'ny laoniny. Ny alina sy ny alina dia mihomehy mafy tokoa: raha vao manomboka mihetsiketsika sy manasitrana ny vatanao ianao, dia manadino anao ny zavatra iray izay mitovy amin'ny anao rehefa nodorana ny vatanao. Ankoatra izany, ny sain-tsain-tava omenao dia tokony hifanaraka amin'ny kianjan'ny tanàna, izay efa naverina hatreny: samy manana ny maha-izy azy ny mpandray anjara. Ao anatin'io fasana io ianareo dia hampitsahatra ny eritreritra sy ny fampiharana avy any ambony. Ny fonosana dia mbola miasa any amin'ny natiora, fa amin'ny lafiny hafa. Amin'ny faran'ny herinandro maromaro ny slaap raha toa ka tsy miasa intsony ny zentuigen-ny fitantanana ny fahamendrehana izay tsy voamarina-mifanaraka amin'ny fotoana tsy voafetra izay miandry ny fiverenan'ny zava-boary any am-piandohan'ny fotoana izay mampifandray anao amin'ny zentuigen ao anaty kitapom-boankazo vaovao sy mavo: ny fombam-paniry ho an'ny zaza madinika izay noraisina ho anao.
Raha vao nanomboka ny fiainanao dia lasa saina ianao. Eo am-pelatànanao ny mombamomba anao. Io fahatsapana ny maha-olona io dia ny tena mahavariana izay efa ela no nahasarika anao. Ny hafa rehetra dia mistery. Ary ianao dia mahatsapa fa ny ady dia mety ho faty tampoka amin'ny alahelonao, ny sarimihetsika ary ny tontolo tsy fantatra. Na dia efa niasa mafy aza ianao dia nampiasaina tamin'ny fomba ofisialy sy ny fampiasana ny fitaovana ampiasaina, dia mamela anao hamantatra ny fanovana. Ho an'ny olon-kafa dia maro ireo olona maty noho ny tsy fahampian-tsakafo. Tokony hifanaraka amin'ny sary ianao.
Ny famonoana anao sy ny zava-bitanao dia miorina amin'ny vatolampiko ao amin'ny vatanao, dia manosika anao hanjary tsy hino ny zava-misy izay mampanahy anao amin'ny fomba hafa izay omenao anao. Ny fianarana ho an'ny ankizy dia lasa mifandray amin'ny ankamaroan'ny zava-drehetra izay tsy dia mahasambatra loatra na tsy azo ampiharina amin'ny fampidiram-bola. Nanao fanamafisana ny zavamisy eto amin'ny tontolo iainana ary nizarazara kely fotsiny ny fahosselen, van illusies. Eo am-panaovana izany dia tokony hijanona ho zava-miafina ho an'ny tenanao ianao.
Ny zava-drehetra dia ny mistery lehibe-Ny lehibe indrindra fa tsy ao amin'ny vatanao, tsy ao anatin'ity tontolo ity ny fahaterahana sy ny fahafatesana, fa ny fahatsapana tsy azo antoka dia ao amin'ny Permanente World manao ny zava-drehetra; Izany foana no zava-dehibe indrindra, amin'ny alàlan'ny fananana anao amin'ny alàlan'ny slaap an-trano anao ary manao izany.
Ny fiainana an-davan'andro avy amin'ny lehilahy amin'ny zavatra izay anomezany azy dia tena zava-dehibe tokoa ny zava-drehetra ho an'ny tenany. Ny tenany: ny maha-izy azy, ny maha-olona sy ny maha-izy azy izay samy manana ny maha-izy azy dia tena fantany ary voatsikera sy mitaky. Daarom dia ny zavamaniry sasany izay samy manana ny fahaiza-manao manokana, ny tena tanjon'ity lehilahy ity, saingy tsy fantatra izay mety ho azy. Izany dia ny faharetana, ny volam-bahoaka ary ny zava-misy, fa ny zavatra hita fa tsy hita ao amin'ny tantaram-bahoaka sy ny tombontsoa. Ny vahaolana dia ny fametrahana azy ho toy ny mahazatra ny laharam-pahamehana sy ny lalàna ao an-tokantranony, toy ny tsy fisian'ny vola sy ny fitakiana izay tsy maintsy atao, ny rariny sy ny tsy manan-danja, ny rariny sy ny hitsiny, fa tsy ny kely kokoa noho ny biby zou zijn.
Zo'n Zelf dia er. Izany dia Zelf van het Drie-enig Zelf, izay azo jerena ato amin'ity boky ity satria iray individuele Drie-inhee dia-ny mpamorona, ny saina ary ny mpandray anjara-izay mihevitra ny iray hafa. Fomba iray ahafahan'ny mpitsidika mamorona biby masiaka sy mampiavaka ny zavamaniry. Ny fanoloran-kevitra dia ny hoe inona no dikan'ny teny hoe "doener-in-the-lichaam". Ao amin'ny lehilahy iray, ny mpihaino dia samy manana ny maha-izy azy manokana avy amin'ny Drie-enig-Zelf izay misy singa iray miara-miditra ao amin'ny "Drie-enig" Zelven. Ny roa hafa kosa dia samy manana ny maha-izy azy, ny mpankasitraka ary ny mpamorona, dia miaina ao amin'ny Fahendrena, ny Faharetan'ny Fahafatesana, izay manatanteraka ny fiainam-piaraha-monina sy ny fotoana ary ny fotoana mahatsiravina. Ny mpitsabo dia nampihetsi-po tamin'ny zenôga sy ny lichaam, ary dia tsy dia mahatsiaro loatra ny zava-misy avy amin'ny andaniny roa farany amin'ny Drie-Enig-Zelf, izay mahazatra ny saina sy mpamantatra. Ny rivotra mitsoka hen. Ny zava-tsarobidin'ny zava-manan'aina dia mitambolimbolina, ny tena zava-dehibe dia mampitombo azy. Tsy nijery ny endriky ny zava-drehetra izy, ary tsy nahasakana azy ireo tsy hiteny ratsy. Raha toa ny mpitsabo dia manambara fa ny zavatra nataony dia natao mba handripahana ny fananganana tsimok'aretina tsotsotra, ny fahiratan-tsaina sy ny fahatsaram-piainana dia mazàna mba hahazoana fahazavana eo amin'ny lalana mankany amin'ny fahalalahan'ny asa. Raha ny marina dia ny mpikaroka no mitady ny hevitry ny mpijery ary ny mpamantatra dia tsy miditra ao anatiny, fa any ivelany fotsiny. Raha ny hevitry ny olona dia ny fahamendrehana dia ny fahamendrehana, ny zavamahadom-piainana izao, efa nahazatra ny mistery.
Plato, tena azo antoka indrindra ny filozofa grika, nampiasaina ho fitarihana ho an'ny fampiharana azy ao amin'ny sekoliny ho an'ny filôzôfia, ny Academie: "Ken uzelve" -gnothi seauton. Nandritra ny fiteniny, dia toa nitombo ny fiheverany fa tsy nisy dikany ny zava-bitany, na dia tsy nampoiziny aza fa nampiasa azy io tamim-pihetseham-po ilay teny hoe "ny tarika". Ny Platon dia nampiasa ny fomba fiasa mifandraika amin'ny fisian'ny Vodiny. Amin'ny sehatry ny artista iray dia mampiasa ny karakiterany izy ary miteraka zava-mahadomelina. Ny fomba fiasa amin'ny dialectika dia tsotra sy mahatalanjona. Ny tanjona ara-tsaina indrindra dia ny mahatsapa fa tsy misy dikany, dia azo antoka fa hahita ny Plato. Ny fomba fitenim-pitenenana azy dia mazava ho azy fa ny fampiasana ny hevitry ny saina, ny fandikana ny hevitry ny teny iray ary ny fanontaniana sy ny fanontanina ao anaty fifamoivoizana. Tsy misy olona afaka mandinika ireo fanatsoahan-kevitra. Raha ny marina, ny Platon dia tsy mila ny fampiasana ny fahaiza-manao mahomby. Tsara homarihina fa noraisiny ny adihevitra ara-pihetseham-po, mba hahafahan'ny olona iray hanana ny fahalalany sy hahafantarana azy amin'ny fahalalana ny zava-bitany. Ny fomba fiasa ara-tsosialy, ny rafitra fiadian-teny amin'ny teny malagasy, dia manampy ny olona hifantoka amin'ny fianarana. Izany no nahatonga an'i Plato misimisy kokoa noho ny hafa koa mpampianatra. Na dia tsy misy sora-baventy aza izy ireo, raha raisiny ny heviny momba ny hevitr'olona, ​​ny zava-boajanahary ihany no mahazo azy amin'ny fomba mahomby. Izahay dia mila mahita.
Ny taona iraisam-pirenena tao India dia nitambatra tamin'ny fitarainana cryptika: "izy ireo dia" (tat tvam asi). Ny zavatra atao dia tsy maneho ny dikan'ny hoe "dat" na ny "anao", na ny hoe "daty" sy "anao" no tokony ho efa nampidirina. Raha toa ka tsy misy dikany ireo teny ireo, dia tokony hampiasaina amin'ny teny voafaritra tsara. Raha vao nahita ny tena anton-diany tamin'ny fahitany dia toa ny zava-dehibe amin'ny hany Indie ny filôzôfia dia ny hoe ao amin'ny olona iray dia manjavozavo tokoa ny etsy an-dakilasy iray samihafa na ny universeel ny ety dia efa nahazatra hatrizay hatrizay, ny zezika dia singa iray avy any an-dranomasina, na iray monja aza dia mahatratra ny vanja raha toa ka mahavoa azy; ary ny hafa, fa io zavatra manokana io, ilay mpandefitra manamboninahitra, dia voalaza fa voalaza ao amin'ny fahamasinana indrindra: atman of purusha- Ny ankamaroan'ny zava-manan'aina rehetra dia niharan'ny tsimok'aretin'ny tsinontsinoavina ilusie, maitso, izay izy no manamarina fa ny mpiasan'ny lehilahy dia voafintina amin'ny fomba manokana sy ny olona iray, raha mbola eo an-tsoratry ny manampahefana ny maha-izy azy dia afa-tsy Ilay universe lehibe dia manonona ny Brahman.
Nambaran'izy ireo fa ny sombintsombin'ny sainan'ny Brahman universal dia nanapa-kevitra fa tsy ny olombelona irery ihany no nahatonga azy ireo, ary ny tsy fananany ny maha-izy azy amin'ny Brahman universal; tondraky ny akanjo fanoloran-tena sy ny doka ary indray miteraka kolikoly any amin'ny natiora, mandra-pahatapitry ny zoky zandriny ny sombintsom-pahefana faramparany dia hita ao amin'ny Universal Brahman. Tsy azo adika izany, fa ny fampiasana na ny fahafaha-misaina dia ny sarotra sy ny lozam-pifamoivoizana dia ny Brahman dia tokony hikorontana toy ny sombin-java-trondro. Na dia izany aza dia nilaza fa ny zava-drehetra maneran-tany dia ny Brahman dia mahasoa kokoa; na izay mety ho endri-tsoratra hafa, na hoe ny natiora dia baat to vindt. Ny tena mahavariana dia sahala amin'ny tsy fahampian-tsakafo tsy misy dikany.
Misy ihany koa ny manaporofo fa misy olona maromaro mitazona ny "isolé" na "voafaritra" amin'ny toetrandro ara-pahasalamana manoloana ny natiora, miaraka amin'ny fakana an-keriny, ny fanesorana ny masomboly na ny natiora, ary ny alemana ny fialan-tsasatra amin'ny natiora dia afaka manome. Nolazain'ny manam-pahaizana fa ny fahafahana dia azo avy amin'ny fampiasana yoga. Misaotra, misaotra ny olona, ​​amin'ny alalan'ny yoga dia mieritreritra fa tsy misy dikany atman, ny purusha- Ny fiheverana ny fahatsapana sy ny fangatahana dia mampihena ny fanavakavahana, ary ny tsinontsinoavina ilazana ny faharesen'ny eritreriny. Rehefa nampianarina ny tenany izy, dia mbola tsy navela hiditra an-tsehatra tao amin'ny Brahman universelle izy.
Ao anatin'izany rehetra izany dia afaka mahita ny marina, ary avy eo ny tsara indrindra. Ny yogi dia nampiditra ny sariny teo ambany fanaraha-maso ary nanamafy ny heviny sy ny fitakiana. Azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny alàlan'ny fanitarana azy. Jereo koa ny pejy Ahoana ny manao takelaka rehefa te-hijery hoe ahoana no fanaovana azy. Izy io dia afaka manorina ny toerana misy azy ao amin'ny natiora, izay mendrika ho an'ny mistery ny mistery, te hianatra sy hianatra. Eo ihany koa ny hahazoana mari-pahaizana ambony momba ny karazam-biby natiora. Ongetwijfeld dia nanandratra ny tsirairay avy amin'ireto zavatra rehetra ireto avy amin'ny tsy fanarahan-dia ireo mpomba azy. Na dia ny rafitra misy ny yoga aza dia mampihetsi-po ny tenany ho "manavakavaka" na "manala" ny zava-miseho avy amin'ny zentuigen, dia miharihary fa ny tena marina dia tsy misy mahasakana ny alàlan'ny natiora. Ity dia mora ny mihevitra ny hadisoana amin'ny heviny.
Ny hevitr'ireo izay ao amin'ny yoga dia ratsy, ny tsindrimpeo mieritreritra, ny saina. Izany dia ny famaritana ny fitaovana ampiasaina amin'ny mpampiasa, izay mamaritra ny asan'ny lika-hevitra. Ity dia hita ao amin'ireo hevitra roa hafa izay tsy tokony hoeritreretina aloha: ny hevitra mahaliana sy ny fangatahana ataon'ny mpanara-maso. Ny fiheverana ny saina dia ny tena fomba rehetra izay ampiasain'ny mpihaino amin'ny alalan'ny zeniny afaka miasa. Ny fampiasana ny lika-saina dia tena voafaritra tsara amin'ny zentuigen, ary dia louter ho an'ny natiora. Daardoor dia ny lehilahy irery ihany no mahatsiaro ho manjaka amin'izao tontolo izao, ka ny tena mahavariana dia izao tontolo izao: ny tontolo andro sy ny tantara. Raha toa ka mitabataba ny fahendreny dia tsapany mazava fa mbola mipoitra avy amin'ny zentuigen azy izy ary mbola any amin'ny natiora dia efa simba, tsy misy ny fatiantoka avy amin'ny voa nateraka natsangana ho an'ny olombelona. Raha ny tokony ho izy dia ny fampiasana fitaovana iray ihany no ampiasaina amin'ny fampiasana azy ara-pihetseham-po, fa raha ny hevitr'izy ireo fotsiny dia tsy afaka manala an-keriny ny natiora izy ireo, ary tsy voamarina ny fahalalany na ny tenany na ny tenany. Ireo fanontana ireo dia ho an'ny mistery ho an'ny saina. Azo lazaina fa nahatsapa izy ireo, raha ny fampiasana ny fiheverana ara-tsaina ny zava-mitranga dia voavolavola amin'ny fahatsapana ny fahatsapana sy ny fangatahana.
Tsy voatery hoe ny hevitry ny Oosterse rafitra dia nahazo ny hevitr'ireo fahatsapana sy fangatahana. Ny adidin'ny mpampiasa dia hita ao amin'ny Patanjali efatra Yoga Aforismen en in vele commentaren op die aloude werk. Patanjali dia tena azo antoka indrindra indrindra ny solontenan'ny Indiase filosoof. Hisoratra anarana no dikany. Na izany aza dia mitombo ny fahaverezan'ny vidim-piainana tsy misy dikany. Te hahafantatra ny antony nanosika azy ireo hanitsy ny tanjona izay nahatonga azy ireo hiasa na hampivelatra. Raha toa ka misy ny paradoxana amin'ny zanatsika amin'ny tsy fanekena, dia tsy maintsy ampitahaina amin'ny lanjan'ny zavatra hita ao anatin'io fitazomana io sy ny fikaon-doha lehibe napetraka mikasika ny fahatsapana sy ny fangatahana.
Tsy ny filozofia hafa ihany no mahazo ny misterin'ny fahatsiarovan-tena ao amin'ny maha-olombelona, ​​sy ny fifandraisana eo amin'ny tenany sy ny tenany, ny natiora ary ny universe rehetra. Ny marary avy amin'ny Indiana dia tsy nahatsikaritra azy, fa fantatr'izy ireo fa ny fahasamihafana dia amin'ny fahatsapana azy-ny atman-tena, ny purusha, ny mpihinam-pahaizana-ary ny natiora: tsy misy lanjany ara-panahy izay natao avy amin'ny mpandray anjara-ny-lichaam Ny lanjan'ny biby natoraly. Ny tsy fahampian'ny fiheverana azy dia mampiseho mazava tsara izao tontolo izao: ny fananganana ny fahatsapana sy ny fangatahana. Izany dia ilaina fa ny fahatsapana sy ny fangatahana no tsy voamarina.
Ny fiarovana ny fahatsapana sy ny fangatahana dia manolotra ny iray amin'ireo tena manan-danja sy ny fandikana ny fanontana ity boky ity. Ny tombony sy ny tombony dia tsy afaka overschat. Ny fahazoan-dàlana sy ny fampiasana ny fahatsapana sy ny fangatahana dia afaka miditra ao amin'ny fandrindrana ny maha-olona sy ny maha-olona azy. Ny mpilatsaka an-tsitrapo dia afaka mamaky ireo rakitra, sangisangy, ary ireo safidy manasitrana izay efa navoaka tao amin'ny dihy. Ny fampiasana sary an-tsaina dia ny fahatsapana ny fahatsapana dia ny fisainana, ny zava-misy izay tsy misy dikany dia ny hevitr'ireo olona, ​​izay hita fa tsy misy olona manintona ny heviny.
Ity dia zava-dehibe ho azy: ny tsirairay dia nampihetsi-po ny fiampangana izay nampiavaka ny sary, ary ny fahatsapana azy dia avy. Ao amin'io boky io dia natao fa ny zavakanto ara-toe-karena, ny elementaire wezens die bewust noho ny ny fonosana, fa tsy mahagaga. Izy ireo dia efa zatra efatra: ny vatana, ny firaisana, ny fery ary ny fitsaboana. Ho an'ny olon-drehetra dia misy singa manokana. Na izany aza dia tsy misy orana ho an'ny fahatsapana, satria ny fahatsiarovan-tena amin'ny alalan'ny body-fefiloha dia tsy natao ho an'ny fakany; Tsy misy ny fizarana avy amin'ny natiora. Izy io dia iray amin'ireo lafiny roa amin'ny mpihaino. Manana ny fahatsapana sy ny fangatahana ihany koa izy ireo, fa ny fanatsaratsaratsaratsaratsihy ny lehilahy kosa, raha ny marina dia navoaka.
Tsy maintsy atao ny fangatahana, ny lafiny hafa amin'ny mpanatanteraka. Ny fahatsapana sy ny fangirifiriana dia tsy azo tsinontsinoavina noho ny hafa, satria izy ireo dia tsy miangatra. Ny iray dia tsy afa-misaraka amin'ny hafa; Izy ireo dia toy ny tavy polona elektrônika, roa tonta ny iray. Ity boky ity dia mampiasa ity bokotra ity amin'ny teny manokana: gevoel-en-verlangen.
Ny fahatsiarovan-tena sy ny fangatahan'ilay mpandinika dia ny fahaiza-manaon'ny hery sy ny zavakanto amin'ny fihetsiketsehana. Ny tanjona dia ny hamolavola ny tetikasa energie izay mihoatra ny mihoatra; raha tsy misy ny fiarovana amin'ny alàlan'ny fiainana. Ny fiarovana sy ny fangatahana dia ny hery enti-manentana izay tsy mety manomboka sy amin'ny farany, ny zavatra rehetra izay mety ho hita, noforonina, noforonina, nampidirina ary nampidirina, na avy amina olona avy amin'ny olona ao amin'ny fianakaviana, avy amin'ireto olona manaraka ireto, na avy amin'ny mpiara-belona de Verheven Intelligenties. Ny fahatsapana-ny-fangatahana dia voafetra ho an'ny asa mavitrika rehetra.
Ao amin'ny fiaraha-monina dia ny fahatsapana sy ny fangatahana ny awareness of this nature of nature. Tsy misy afa-tsy ny efatra amin'ireo zandriny. Ny fahatsapana, ny lafiny ara-pitaovana, dia ny dite ao amin'ny nofo izay mahafaty, ka ny vatany manontolo dia mahafaty toy ny afrikana izay nomena tamin'ny efatra zintiigen ho toy ny fahatsapana ho an'ny fombam-pivavahana. Azo ampiasaina amin 'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana an-tsokosoko, toy ny famokarana herin-javamaniry, ny tsiranoka na ny voatitravoel. Afaka manome izay tsara sy azo antoka, ary mahafinaritra raha efa nandrasana. Ny fangatahana, ny asan-java-kendreny, dia ny fahatsapana ny herin'ny maizina izay mampihetsi-po ny fikorontanan'ny toetr'andro. Ny mpiasam-panjakana dia miasa ao amin'ny lafiny roa samy hafa: ny fialantsasatra avy any amin'ny fiaraha-monina, ary manana ny heviny ho an'ny fangatahana.
Miezaka mafy ianao mba hahafantarana ny fihevitr'izy ireo ao amin'ny vatanao, raha toa ianao ka mahatsapa ny fahatsapana fa ny sainao dia somary, ny fialam-boly dia ny maha-zava-dehibe ny maha-zava-dehibe ny vatanao, ary amin'ny fotoana mitovy ny faharesen-dahatra ny fangatahana izay mitroka ny volonao, fa tsy ny ra tsy misy. Ny fahatsiarovan-tena sy ny fangatahana amin'ny karazany efatra dia tsy maintsy ampiasaina. Araka ny fantatra dia voafetra ny fahafaha-miteny sy ny fangatahana, mamela ny fifamindram-pahefana hahafahany mamono ny mpiray tanindrazana amin'ny olon-tsy fantatra amin'ny fomba fiasa toy ny nofon-tany. Nihetsiketsika ny fahatsapana sy ny fangatahana an-tserasera, dia tsy afaka mahita afa-tsy ny filôzôfia any India miaraka amin'ireo sary hafa.
Ny Oosterse dia nahafantatra fa, mba hahafantarana ny fahatsapana ho azy ao amin'ny nofo, dia tokony hanana eritreritra sy fanararaotam-pahefana sy ny tsy fahampian-tsakafo izy ireo ka tsy afaka manapaka ny fahatsapana manokana sy ny fangatahana. Na ny universe misvatting fa ny fahatsiarovan ny iray amin'ny zentuigen avy amin'ny nofo, dia tsy mba tafiditra. Amin'ny ankapobeny, ireo mpampianatra dia milaza fa ny fahatsapana na ny fahatsapana dia ny ampitso fahaefatra, fa ny fangatahana ihany koa ao amin'ny karazana nofo, ary ny azy dia ny fahatsapana fa ny fangatahana zavatra natokana ny natiora ao amin'ny nofo. Ao amin'ny fandikana an'io hevitra io dia voalaza fa purusha, of atman- ny mpiasan'ny fahasalamana, ny fahatsiarovan-tena sy ny fangatahana-ny fahatsapana tanteraka dia tokony hikirakirana ary ny fangatahana dia tsy maintsy mielan-doza, "miteraka".
Ao amin'ny lelan'ny toetr'andro eto dia misy fiantraikany amin'ny filaminana sy ny fangatahana, dia toa mahatsikaiky kokoa ny ilana azy any ivelany. Ny tsy fanekena, ny tsy fahampian'ny vatany ao amin'ny vatany dia tsy vernietigen. Raha toa ka tsy misy ny fiaraha-miasa sy ny fangatahana dia tsy maintsy atao ny mividy azy, fa ny sary fotsiny dia tsy misy afa-tsy ny fiarovana rafitra fanairana.
Ny fiheveran-dry zareo ny fisafotofotoana amin'ny fangatahana-fangatahana, dia tsy afaka mahita ny fahalalana rehetra ny manam-pahaizana Indiase, na dia mahafantatra tsara ny hevitry ny Drie-Enig. Raha ny fanazavana nomen'ny "anao" dia tokony ho voamarika fa ny "anao" amin'ny atin-kiran'ny purusha dia-ny olona manokana, mampihetsi-po azy-ary ny "dat" izay ny "anao" dia lazaina fa "universe", ny universe mihitsy, Brahman , dia. Izy no tsy namorona ny zavatra nataon'ireo olona sy ny sariny. Manana karazam-pahaizana manokana amin'ny Brahman universelle sy ny tontolo rehetra. Noho ny fahazoana an'I Brahman manerana izao tontolo izao sy ny fisian'ny tsindry manerantany rehetra, dia ireo tsy manan-kialofana ireo no voatanisa ireo zandary. Ny fiheveran-tena ho fiarovana sy ny amboaram-peo dia izy ireo no tena manan-danja indrindra fa ny olon-tsotra Brahman ihany no mandao azy: ny olona iray manana ny maha-izy azy, ny tenany manokana dia miara-miditra amin'ny hafa tsy misaina Zelven.
Ho an'ny filoham-pirenen'i Oosterse dia mazava ho azy fa ny mpitsoa-ponenana dia natsangany ho an'ny natiora ary tsy mitsaha-mitombo ny vovony amin'ny tenany, dia miteraka tsy misy dikany ary manjavozavo ny tsy fahampian'ny toe-pahalavorariana, ary ny fananana azy dia tsy maintsy atao amin'ny hevitry ny olona mba hisorohana ny fahamendrehana sy hametrahana azy ity fomba ity. Ny fampiasana azy dia tena tsara tokoa fa ny fanamafisana ny fomba fiasa, na ny fiheveran-tena ho azy, fa raha ny fanaraha-maso fotsiny dia tsy maintsy misy ny rafitra efa ela izay tsy maintsy atao raha tsy efa voavaha sy voavela heloka: ny vidiny iray izay tena marina dia efa fantatra, ny fiarovana ny fiarovana sy ny fangatahana an-tsoratra ho toy ny tsy fahampian-tsakafo an-tsokosoko, ary ny lalana mankany amin'ny fahalalana ny volany manokana. Ny anton-javatra maromaro avy amin'ny fanamafisana dia mamaritra izay azo antoka, ary ny filazana fa ny teny fialantsasatra ao an-tsekoly ao an-tsekoly dia efa natao ho an'ny vidin'ny universelle Brahman sy paradoxes doctrines izay mampihorohoro ny fahatsapana sy ny fangataham-batana ho zavatra manan-danja de kant zetten.
Izy io dia tsy natao hialokaloka izay tsy nafenina: De Bhagavad Gita, Ny ankabeazan'ny ankamaroan'ny tovovavy any India, ny iray amin'ireo tsy manan-tsahala. Ny zava-drehetra dia milaza ny Krishna any Arjuna, ny sekretera, ny hatsarana ary ny voninahitra. Na dia samy manana ny androm-piainany ao anatin'ny fotoana fohy aza ny tantara dia efa lasa lavitra toy ny efa ela ny foto-pinoana Vedika raha ny fahatsapany ny faharetany, mahatonga antsika ho mafy dia mafy ny hanazava izay tokony ho an'ny olona Krishna sy Arjuna, Hijanona ary ny fomba fiasa izay manana ny fomba fiasa hafa, na eo ivelan'ny sary. Azo ampiasaina araka ny fepetra apetraky ny lisansa Creative Commons Attribution-ShareAlike; Mety misy ny fepetra fanampiny mihatra. Fotoana izao dia azo adika amin'ny fampianarana ara-teolojika sy fotopisialy ara-tsoratra, izay azo antoka fa hafenina ary ny valiny marina dia mendrika valiana.
Noho ny filozofia Okraina momba ny tsy fahampian'ny hafanam-po sy ny fisainana dia manondro ny fomba fitenenana momba ny fisoratana anarana ao amin'ny vatan'ny olona ary ny olona sasany dia samy manana ny heviny ary indraindray dia mitaky ny faharetan'ny India. Matetika izahay no miverina any amin'ny ilany andrefana.
Avy amin'ny finoana kristianina no tsy fantatra ny fehezan-teny sy ny tantara. Ny Eeuwenlange firenana dia nanana literatiora iray nampiarahina tamin'ny famoahana ny votoatin'ny fialan-tsiny. Ankoatra ny fanombohana voalohany, dia mbola betsaka ny fianarana, saingy tsy misy sora-baventy hafa ankoatra ireo hevi-dehibe izay efa notaterina teto an-tany.
De parabels en uitspraken in De Evangeliën matoantenin 'ny mpanao matoantenin'ny atao, tsotra ary fahamarinana. Ny sasany aza dia nahatsikaritra fa ny zava-boaary vao haingana dia napetraka, tsy nahatsapa izany. Ny fanoratana dia tokony hofaranana ary tsy ilaina ny mamoaka olona amin'ny saran-dalana. Na izany aza dia voalaza fa nampiasaina ho an'ny besinimaro ny tsara indrindra ho an'ny mpanjifa, ny hena tsy natao ho an'ny tsirairay dia natao, fa ny "iray indray mino". Ny evanjely dia mistery, ary tokony ho fantany fa hafenina ny iray izay fantatra fa fantatra. Ny Vader, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia manana ny mistery rehetra. Ny tsy fananan-tany sy ny fahaterahana ary ny fiainana an 'i Jesoa dia ny mistery, tsy toy ny fanenjehana azy, sy ny fanenjehana. Ny fandrakofana ny lanitra sy ny helikoptera, ny dihy ary ny misterin'ny fanjakan'Andriamanitra, satria tena mahagaga tokoa fa ireo fotodrafitr'asa ireo dia tokony ho hita amin'ny ankapobeny ho toy ny sary famantarana iray. Raha ny marina dia tokony ho hita ao anaty lisitra ireo teny ary ny teny hoe tsy tokony ho hita aloha fa tokony ho hita ao amin'ny mistery, raha toa ka misy hafa manana adiresy manokana ho an'ny sokajy manokana. Raha ny marina dia tsy mahazatra ny mampiseho fa ny parabola sy ny londenina dia tokony tokony ho hita. Ny mistery manerana izao tontolo izao-saingy tsy dia misy dikany loatra. Inona no atao hoe mysteries te hiresaka?
Hita izany De Evangeliën Ny tanjona dia ny hahatsapa ny fahatsapana ho an'ny fiainan-tsiambaratelo sy ny fahafantarana fa tokony ho velona tahaka izany ianao; Fomba fiaina: mavitrika andro aman'alina ny fambolena sy ny fambolena ary ny fambolena, ny fambolena, ny fambolena ary ny fambolena. Ny olona dia tokony ho hita mazava tsara ny fomba fiasa, izay milaza fa tsy tokony hividy zavatra toy izany izy ireo, ary ny olona rehetra dia tsy afaka mahalala mivantana. Ny fiantsoana an'izany zava-miafina izany dia midika ao amin'ireo asa soratra kristiana ho an'ny fahasamihafan'ny fehezan-teny miafina sy miafina. Ho an'ny mpampiasa azy, dia misy ireo fanoharana fanoharana momba ny lozam-pifamoivoizana: fomba tsotra sy endrika sary izay natao hanolorana fitoviana moraly ary ny fianarana ara-pinoana, ary ny fandikana ny ao anatiny, ny zava-drehetra niainana dia nahatonga ny famoahana mazava tsara rafitra fiarovana. Ireo Evanjely amin'ny androm-piainantsika dia efa fantatry ny olona androany, fa tsy ny fifandraisana izay tokony homen-dririnina amin'ny endrika rafitra. Inona no atahorantsika, tsy ampy. Izy dia tsy voafaritra mazava tsara ny code, izay miaina ny zava-miafina azon'ireo zava-miafina azo atao dia ny mamoaka ny hevitr'ireo takelaka.
Ny tena tsara indrindra dia ny mpandinika ny tena Kristianina dia i Paoly. Nandritra ny fikarohana nataony, dia nanandrana nanazava ny heviny izy ireo mba hahazoana azy ireo. Na izany aza anefa dia ilaina ny mamantatra ny dikanteny amin'ny fiteny ofisialy amin'izao fotoana izao. "Ny epistilin'i Paoly ho an'ny Korintiana", ilay antikristy voalohany, dia midika fa mihevitra ny sasany amin'ireo fampianarana sy mazava omen'ny torolalana momba ny fiainana an-trano. Na izany aza dia tokony hanamarina fa ny fandaharam-potoana tsy natao tamin'ny alàlan'ny fanoratana dia noforonina - izay efa noporofoina -, na dia efa voafafa aza ny sasantsasany avy amin'ireo sora-baventy nalefany. Amin'ny ankapobeny, ny teny hoe "De Weg" dia tsy gewezen.
Inona no mahasamihafa ireo zava-miafina amin'ny mistery? Ny resaka dia azo lazaina fa ny fandalinana ny foto-pinoana vaovao teo aloha. Eo am-panaovana ny fampihorohoroana amin'ny sehatry ny fotopampianarana dia mety tsy ho faty ny doodrafaina. Araka ny fanazavana nomen'i Jesosy teo aloha, dia maty i Jesosy, satria nafeniny mivantana ny fahamarinana sy ny lalana ary ny fiainana.
Fa androany ny androany dia ny fahamendrehana no misy: misy olona iray milaza fa heveriny fa mistery ny fiainana. Ny olona rehetra dia mieritreritra ny handresy lahatra ny fiaraha-miasa sy ny fampiasana ny maha-lahy sy maha-vavy ary ny fahatsapana fa misy azy; Ny fiheveran-tena ho an'ny lehilahy dia manana ny fifandraisana eo amin'ny fiaraha-monina sy ny zava-misy Fa ny, ary amin'ny lalana mankany amin'ny fahaiza-manaony dia tsy ilaina ny manafoana ireo tsiambaratelo voalaza fa ny toro-làlana misy ny code dia mba hanazavana azy. Nandritra io vanim-potoana io, ny "fampitandremana", ny "tranga", ny "secret" ary ny "fampidiran-tsoa" dia nampidirina tao amin'ny tranonkalan'ny tsiambaratelo manokana, ny fitiavan-tanindrazana na ny varotra.
Noho ny fisian-tsika, ny sekretera, ny sektarisma ary ny fahasamihafan'ny habakabaka manoloana ny hevitry ny mistery, dia ny Kristianisma no manavakavaka maneran-tany. Efa ela ny olona no nanjary niova, ary mety ho hafa noho izany aza. Tsy maintsy misy ny tsiambaratelo omena, ary izay nohajain'izy ireo ihany koa; ireo toe-javatra izay efa nahazatra nandritra ny taom-pilalaovana nandritra ny taom-pilalaovana nandritra ny taona maro ary ny maha-olona azy dia tsy nahomby.
Ny fahatsaram-panahy dia mifamatotra amin'ny maha-olona azy, izay voafintina amin'ny maha-olona manontolo ao amin'ny maha-olona azy. Ireo zava-miafina rehetra dia tsy voatery hianjadian'ny faharesen-dahatra. Amin'ny fotoana rehetra, ny filôzôfikan'ny rafi-pitantanana dia tsy maintsy hampitaina ireo zava-mitranga ireo, ary ny fahamendrehana ara-pahasalamana dia miteraka.
Ao anatin'ny fotoana fohy dia misy ny zava-misy, dia ny Vrijmetselarij. Ny Vrijmetselaarsorde dia tsy manana zo ho an'ny maha-olona ary ho an'ny olon-kafa. Ny mpandray anjara, ny Vrijmetselaars, dia manantena fa tsy ny lehibe indrindra. Ny didim-pitsarana dia nanamafy ny fampahafantarana momba ny tombontsoam-pirenena, fampahafantarana momba ny famolavolana ny fahamboniana iray ho an'ny olona iray izay tsy dia mahomby loatra. Ny zava-miafina tantara an-tsehatra, dia natao tamin'ny fametrahana ny trano avo lembalemba. Izany dia miavaka mandrakariva. Ny Tempoly dia ny famantarana ny maha-lahy na maha-vavy izay tokony ho an'ny lehilahy, naorina, ho an'ny fizik ara-batana izay tsy nodinihina, fa mandrakizay izany, ny fahaizana ara-dalàna ho an'ny tsy fisian'ny tsy fahampian'ny mpitsoka. "Ilay teny" izay "very" dia ny hoe ny fahadisoany dia ao amin'ny maha-olona azy-ny kolontsaina iray lehibe indrindra amin'ny tempolin-tsampy saingy ny toe-tsainy dia hita fa mihodinkodina sy mihodikodina ny fanaraha-maso.
Ity boky ity dia mametraka ny fahazavana, mamela ny fahazavana eo amin'ny fisainanao; Hahita ny "lalana" hitadiavanao ny fiainana. Fa ny fahazavana izay nampitaina dia tsy misy lanjany izay hita ao amin'ny natiora. Izany dia fahazavana vaovao. Ity dia vaovao, satria tsy misy mahatsapa ny hasarobidiny-raha ny marina dia fantatrao. Ao anatin'ity boky ity dia: ny fahazoana hazavana avy ao anaty. Ity sary ity dia afaka maneho ny maha-zava-misy azy, ary ny Lighting of Intelligent dia mifamatotra. Noho ny maha-zava-dehibe an'io hazavana io dia afaka manamboatra ny heviny ianao: fahatsiarovan-tena izay mampifanaraka ny zava-manan'aina sy ny fomba amam-pahalalana anao. Ny mahazatra dia ny hoe: ny fahazoana mason-tsivana ao anatinà lalam-piainana tsy tapaka ary mifantoka amin'ny hevitr'ireo hevitra. Miomàna hiaro anao amin'ny famaritana. Ny tena mahasamihafa ny hevitry ny olona dia ny fahalalana ny tenany. Ity data ity dia afaka mamantatra ny fotoana sy mahazatra anao, dia ny fahazavana amin'ny Intelligence, ny fahazoana hazavana ao anatiny. Nolazain'ity farany fa ny fahazavana dia tokony ampiasaina mba hahazoana ny fahazavana.
Ny boky dia mahita fa ny zava-misy dia tena zava-dehibe, marina tokoa. Ny tena mahavariana fa ny lehilahy no mamorona, dia ny eritreritra izay heveriny. Ny bokin 'i Môrmôna dia mirakitra ny fomba amam-panao ara-mekanika izay efa voavolavola, ary hita fa maro ireo efa niandry ela kokoa noho ny zavakanto na ny atiny izay nahatonga azy ireo ho velona. Ity dia mahita fa ny fahatsiarovan-tena ho an'ny olona dia manana hery lehibe: izy ireo dia ny mason-koditra, ny mason-koditra na ny modely izay mahasoa ny maotina, ny zavamananaina maina izay manova ny natioran'ny natiora, ary ny aingam-panahy iray dia ny fomba fiaina sy ny endrika noforonina geeft. Ny hevi-baovao dia ny mamolavola ny rafitra, ny fanamafisana sy ny fandrosoana. Ny boky dia milaza fa ny tsy fahampian'ny fahatsapana ho an'ny lehilahy dia ho hita amin'ny asa aman-draharaha sy ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny tenany manokana sy ny fivelomana, ary mandritra ny fiainany rehetra manerana izao tontolo izao. Na izany aza dia misy ihany koa ny hoe ny lehilahy dia afaka mieritreritra fa tsy tokony hampidirina saina, ary ny fomba hafa dia afaka misintona azy.
Het woord ny mitovy dia nampiasaina tamin'ny alàlan'ny fampiasana ny teny hoe alomvattende term izay tsy voatery mamorona teny ampiasaina ho an'ny karazan-javatra rehetra. Izy ireo dia milaza fa ny lehilahy dia iray ihany no mpanakiana. Amin'ny tena marina dia mampihetsi-po ny mpampiasa ny fampitam-baovao amin'ny lafiny samihafa, izay te-hilaza hoe: fomba hanehoana hevitra amin'ny zavatry ny fahazavana. Ireo zavatra ireo dia toy ny voamarina, ny lika-saina, ny fahatsiarovan-tsaina ary ny fangatahana-hevitra. Ny fisainana dia ny miasa ara-tsaina. Daarom dia tsy miasa afa-tsy amin'ny mpandeha. Ny fampiasana ny iray amin'ireo dokotera telo dia mihaino ny fahatsapana sy ny fangatahana, ny mpampiasa.
Ny fiheverana ara-batana dia tsotra fotsiny ny fahendren'ny intellect. Ny fampiasana ny fahatsiarovan-tena sy ny fangatahana dia ny fampihetseham-batana ho an'ny natiora, ho an'ny mpiasan'ny masinina amin'ny maha-olona azy, ary izany dia voalaza ao anatin'ity boky ity ny lika-saina. Izany dia ny fitenenana rehetra izay nopetahana teo amin'ny tsangambaton'ny lichaam, ary ny fiarahany miasa amin'ny alalan'ny zentuigen dia miasa. Izany dia ny fitaovana maoderina izay mahatonga ny saina ho zavamananaina noho ny zava-boajanahary momba ny tontolo iainana, ary ny zava-boaary dia azo ampiasaina sy ampiasaina.
Ny fahatsiarovan-tsaina sy ny fangatahana-hevitr'izy ireo dia mbola tsy mahomby amin'ny fampiasana ny fahatsapana sy ny fangatahana, na dia tsy afaka manangona ny zavamaniry aza. Ireo hevitra roa ireo dia nampiharina tamin'ny fomba ofisialy tao an-tsain-kevitra izay nahatonga azy ireo hifehy azy sy ny tsy nety nataony. Izany dia efa nampiasaina tamin'ny fomba fanao mahazatra mba hampifanaraka ny hevitr'ilay fiheverana fa ny mpiara-belona dia mitambatra amin'ny natiora ary manambara fa ny fisamborana azy dia toy ny zavatra izay tsy mitovy amin'ny endrika.
Ny tena mahasamihafa ny psikolojia dia tsy misy dikany. Ny fizotry ny toe-pahasalamana ankehitriny dia natao ho fandinihana ny fomba fiasa. Ity dia tsy misy zavatra hafa ankoatra ny fanadihadiana mikasika ny mason-tsivana sy ny tontolon'ny natiora amin'ny alalan'ireo zentuigen amin'ny mozika mahaleotena, ary ny valin-kitsim-po amin'ny mombamomba ny olon-dratsy. Nefa tsy misy psykolojia.
Tsy afaka ny hiteny momba ny fiheverana ara-psikolojia izy, raha tsy hoe misy dikany ny hevi-dehibe dia ny ao anatin'ilay psyche sy ny heviny; Raha tsy izany dia tsy ampy ny fiheverana ny fisainana, amin'ny fomba fiasa ny mpandinika sy ny fiaraha-miasa ary ny fonosana izay miasa. Ny psikologina dia ny toe-tsainy, fa izy ireo tsy mahafantatra izany rehetra izany. Raha ny toe-pahasalamana dia azo atao ny mamolavola ny tena marina, dia tokony hanana fahatsapana ara-pahalalana momba ny fifandraisana amin'ny hafa izay miasa ao anatin'ny fe-potoana farany ny mpandinika. Ity no fototra ahafahana manangana sehatra fototry ny hevitra sy ny mombamomba ny fifandraisana. Ity boky ity dia milaza fa ny fahatsiarovan-tena sy ny fangatahana dia tokony atao amin'ny sehatra roa, ary milaza fa ny lehilahy iray mpitsikilo dia voahosihosy amin'ny fangatahana, na dia eo am-pialam-boly iray aza ny lehilahy iray amin'ny fahantrana amin'ny fangatahana; ary ao anatin'izany rehetra izany, ny mpandika-teny an-dalàm-pandrenesana dia iray amin'ny roa, miaraka amin'ny fiheverana amin'ny sehatra ara-pahasalamana izay ampiasaina. Raha ny marina, ny fifandraisana rehetra dia miankina amin'ny fampiasana ny fiheverana ara-tsaina amin'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Ny fampiasana toe-tsaina tsy manam-paharoa ankehitriny dia tsy tokony hojerena tsara, raha toa ka efa zatra fiteny iraisana amin'ny ankapobeny. Ny antony dia satria ny zava-drehetra dia eo amin'ny sehatra, ny fampiharana ny tanjon'ity zava-mitranga ity dia tsy misy dikany, mahasadaikatra sy mahasosotra ny manamarina ny fandinihan-javatra ara-dalàna momba ny lalàna. Manana mari-pahaizana ara-psikolojika momba ny biby masiaka sy ny tanjona hafa izy ireo rehefa namorona ny fianarany. Efa ela ny fananganana fanangonan-tsonia, fa ny olona dia mitovy amin'ny "body, soul and soul". Tsy misy olon-droa miaina fa ny zavamananaina dia zavamaniry mahazatra, fa ny saina sy ny zava-kendrena dia manana fahamendrehana sy tombontsoa manokana. Raha ny marina dia misy ny zava-misy marina, ity boky ity dia mazava ho azy.
Ity boky ity dia milaza fa ny fiainana velona dia mazava ho azy. Ny mampiseho fa ny tanjona sy ny andraikitry ny lehibe dia ao anatin'ny tetik'izao tontolo izao, ary ny tsy fanatanterahana izany. Nolazainy fa ny singa iray amin'ny natiora dia misy singa-endriny, singa iray amin'ny singa iray. Ary raha ny fahatsapana, fa tsy ny tsindriam-panahy entina ilazana azy dia ny karazam-biby natoraly, izay mamaritra ny fombam-panamboarana: ny singa manan-danja singa iray ao amin'ny fikambanana ara-nofo, izay tototra mandra-pahatapitr'io endriny io dia aorian'ny fotoana maharitra ireo singa fototra rehetra natokana ho an'ny natiora. Amin'ny ankapobeny, ny karazam-borona rehetra dia samy manana ny maha-izy azy ireo mba hiasa amin'ny maha-tompon-tratra automatique amin'ny fomba famolavolana ny maha-olona azy. Amin'ny fotoana toy izao, dia afaka manampy azy ireo ny fanatanjahan-tena mahomby amin'ny fomba mahazatra ao anaty fiara iray mba hampiasana ny karazam-borona vaovao sy ny tsiranoka mba hanorenana ny tranon'ireo olona ireo, ary amin'ny alàlan'ny fametrahana ny fiaraha-monina sy ny fahamendrehana ho an'ny besinimaro, izay lazain'ny mpandinika ny heviny.
Izany dia atao hoe Adem-vorm genoemd. Ny zavatra manaitra ny endriky ny endrika dia ny adem. Ny ademana dia ny fiainana, ny saina, ny zavakanto ary manatanteraka ny rafitra rehetra. Ny lafiny hafa amin'ny endriky ny endrika, ny endri-javatra, dia ny endrik'ilay modely, ny patroon, ny matematika, izay ahitana ny rafitra ara-batana dia nampiasaina tamin'ny zavatra hita sy ny fanatsarana ny asa. Ity fomba ity dia manaporofo fa samy manana endrika roa avy amin'ny endri-tsoratry ny felam-pahefana, izay mety hahavelona azy.
Noho izany, ny fanamafisana ny maha-olona azy dia ny aingam-panahy sy ny fanahy dia midika fa ny maha-olona azy dia avy amin'ny zavamaniry; fa ny ota no mahazo ny fiainana mandrakizay, satria velona aina eo anatrehan'Andriamanitra ny Lalàna. ary izany dia ny zava-kendren'ny tranon-tsarimihetsika na ny tsy fanehoana an-tsary ny fizika. Ny zava-dehibe dia ny fanamasinana ara-tsakafo izay mamorona ny masom-bozaka vy sy ny mitevoka vita, mipetaka, voaorina ary natsangana.
Ny fisian'ny psychologie dia tsy misy dikany ary ny tsy fahampian'ny mari-pana, dia mifototra amin'ny toe-javatra iray tena ilaina amin'ny fampiasana azy. Ny adem-vorm dia mandrindra ny fahaleovan-tena, ary mahatonga ny fisian'ny fisamborana izay avy amin'ny natiora. Ny adem-vorm verricht ihany koa ny fialamboly fihetsika ny lichaam, izay noheverina fa ny hevitr'ireo mpandray anjara-ny-sary no voatatitra. Ity fomba ity dia miasa toy ny fialana amin'ny natiora ary ny tsy fahampian-tsakafo izay tsy hita ao amin'ny vatany: ny otomaat izay mameno ny maso mandavantaona eo amin'ny fiparitahan'ny zavaboahary sy ny tontolon'ny natiora, ary ny hevitr'ilay mpahazo.
Ny litera anao dia mazava ho azy ny vokatry ny hevitrao. Ny fahasalamana sy ny zava-mitranga ihany koa dia manampy anao ny eritreritra sy ny fahatsapana ary ny fangatahana. Ny hoditra vita amin'ny mofomamy sy ny ra dia tena zava-dehibe ny fanehoana ny tsy fananan-tany, ny anao. Izany dia ny fanitarana, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fahatsiarovan-tena lalina. Izany dia ny fitantarànao ny eritreritrao sy ny ataonao ary ny fitenenanao ho toy ny olona iray. Ity dia ahitana ny fiarovana sy ny tsy fahampian'ny zavamaniry.
Ny mifanohitra amin'izany aza dia tsy ampy ny mieritreritra, fa ny olona dia tokony hahatsapa ho tsy mety; fa tsy maintsy hiverina any an-tanindrazany izy, izay efa very tany aloha. Amin'ny ilany Andrefana, dia toy izany hatrany hatrany ny tweeter amin'ny taona maro amin'ny ankapobeny. Ao anatin'ny fotoana dia efa nibebaka ny fiainan'ny olona, ​​ka nanampy ireo mpanampy an-trano namoy ny ainy noho ny antony nahaterahany, dia nihaino ny fampitam-baovao tamin'ny fampiasana azy, ka lasa lasa mpino. Na dia teo aza ny fahatsapana fa mbola tsy nahitam-bahaolana izy ary tsy dia nampiova loatra ny heviny ary ny hevitry ny olona dia lasa adala amin'ny fahatsapana sy ny fangatahana hafa; ary ny fialan-tsiny amin'ny fehezan-teny izay nodinihina androany tamin'ny fomba maro samihafa dia navoaka-ny tsy fahampiana, ny hafanana na ny fahatsiarovan-tena - dia mampiseho ny hevitr'izy ireo amin'ny alohan'ny foto-pisainan'ny olona ankehitriny, ary dia fantatray fa izy dia mihevi-tena araka ny tokony ho izy geschonken wordt.
Ny tena marina dia mety tsara izany, fa ny sasany dia mitaky ny fanatanterahana azy amin'ny fomba mahagaga, na dia misy aza ny zava-misy. Ho an'ny fampahalalam-baovao: ny fananganana izay mahatsara ny fombam-pivavahana iray tsy azo lavina dia mety ho vita; fa ny zavamananaina dia mety ho lany tamingana ary namboarina tao amin'ny toeram-piompiana sy tany an-tsekoly, izay efa ela niainana dia nandao azy; Ary farany, ny fahatsapana fa ny fitantanana ny volavolan-dalàna sy ny tsinontsinona dia tsy natao hahatsara ny fahafatesana na ny zava-drehetra any an-tokantrano, fa ny fiainana ao amin'ny tontolo iainana. Ity dia afaka mampiseho ny zava-misy, fa raha ilaina izany amin'ny fomba mahomby dia tsy voatery handresy lahatra.
Satria ny vatan'ny lehilahy dia tokony ho faty, dia tsy mendrika. Ny mpankasitraka dia ny fitarainana, fa ny lehilahy ihany no afaka miala amin'ny fiainana mandrakizay. Ny mpahay siansa no nitaky ny fotoana farany, izay tsy misy antony dia ny fivelaran'ny fiainan'ny olona dia tsy mety amin'ny fotoana voafaritra, raha toa ka tsy voamarina fa mety hitranga izany. Ny ongetwijfeld dia nahafantarana azy ireo ho an'ny olon-drehetra. Na dia maty aza izy ireo noho ny tsy fisian'ny fanavakavahana dia tsy maintsy atao. Ao amin'ity boky ity, ao amin'ny sehatra De Grote Weg, dia manambara fa ny fombam-piainana dia mety ho azo atao ary ny fampidirana ny volavolan-dalàna dia natolotra ho tempoly ho an'ny totalin'ny Drie-enig.
Ny sekretera dia zava-miafina izay tokony hampiasaina amin'ny lehilahy. Ny kisendrasendra manokana dia tokony hiteny. Na dia ny lehilahy aza dia nahatsikaritra ny fiarovan-dry zareo, ny doka, izay efa ela no teo aminy ka tsy afaka nisakana azy. Ity boky ity dia milaza fa ny fahaiza-mampiasa fahaiza-manao dia mety ho ny tsara indrindra no tsara indrindra ho azy ireo; fa ny fahatsapana sy ny fahatsaram-panahin'ny fikambanana dia mety ho azo atao ny manatanteraka ny tanjona sy ny zavatra hafa.
Ny lehilahy dia ny mistery mistery: ny mistery avy any an-danitra, ary ny misterin'ny lozam-piombonam-bavaka. Izy no namorona ny mistery matanjaka, ary izy no mamely. Ny lichaam dia ny sarin-javatra ary izy dia ny solaitra ao amin'ny trano. Ny fanamelohana an'io boky io dia azo ampiharina, satria afaka manapa-kevitra ny tenany ianao amin'ny maha-manan-danja azy amin'ny mistery ho an'ny tenany; fa ny tenanareo dia mijoro ho vavolombe- lona; fa ny anao ihany no mahalasa azy ho toy ny fahalalahana; raha toa ianao ka mampiasa ny solo-teny mba hamoahana ny efitrano izay efa voavolavola, dia manokatra; ary amin'ny alalanao, amin'ny alalan'ny lichaam, ny mystery of nature dia afaka mahazo sy mahalala. Manompoa ny masonao amin'ny masonao, raha ilaina izany. Ity milina iray ity dia miasa miaraka amin'ny fangatahana ny natiora. Rehefa mampiasa ny mistery ianao amin'ny maha-olona anao amin'ny fahaiza-manao sy ny fiasan'ny masonao masiaka, ianao dia ampitaina amin'ny lanjan'ny fahavitrihan'ny onjam-peo eo amin'ny natiora. Manana anao ho fantatry ny olon-tsy fantatra izay tsy fantatry ny olona, ​​ary afaka miara-miasa amin'ny zavaboary masiaka amin'ny natiora, amin'ny alalan'ny sarimihetsika ara-pahasalamana izay misy anao.
Ny mistery hafa dia ny vanim-potoana. Ny vanim-potoana dia mitazona an-tsokosoko ho toy ny fanadihadiana mahazatra. Nefa raha misy olona te-hamantatra sy hamantatra izay mety ho zava-misy, dia misy ny abstracts sy ny zavatra tsy fantatra. Tsy azo atao ny manome azy, raha tsy misy ny fitsangatsanganana, tsy misy dikany, miala ary mahazo ny heviny. Mbola tsy voamarina hoe inona izany.
Ny vanim-potoana dia ny fampivoarana ny singa, na ny vondrona lehibe, eo amin'ny fifandraisana amin'ny elkaar. Ny fepetra tokana dia tsy natao ho an'ny rehetra ary tsy maintsy atao amin'ny fomba voafaritra sy ny toe-javatra mba hahazoana ny fahalalahana. Ny mpitsikilo dia mila fotoana voafaritra, na dia misy aza ny toe-javatra mitranga ao anatin'io lahatsary io. Ao anatin'ireo andaniny sy andaniny dia miova ny fotoana. Ho an'ny mpihaino mahatsapa ny fotoana toy ny fifandraisany dia tsy dia mazavazava loatra rehefa mihomehy izy, na mandritra ny fotoana slaap, na amin'ny fotoana izay mety hamonoana ny nofo, na amin'ny famaranana ny kianja na ny taolam-paty, na amin'ny fiandrasana amin'ny fananganana amin'ny fahaterahana indray ny lalao vaovao izay hikolokolo azy. Ny iray amin'ireo dia samy manana ny "In the beginning", izay mbola mandeha, ary ny farany. Ny fotoana toy ny kibon'ny ankizivavy, dia mihazakazaka amin'ny fanatanjahan-tena, ary miezaka mafy hianjady amin'ny taolan'ny nofo.
Ny vanim-potoana dia ny tranonkala misimisy kokoa, izay voafinton'ny ivon-toeram-ponenana mba hanova ny fomba fiasa. Ny fampiasana ny tranonkala dia voaverina, dia ny adem-vorm. Ny lika-hevitra dia ny mpamorona sy ny mpampiasa azy, ny tranonkala fanala ary ny fihoaram-pefy ho an'ny "lozisialy", "hehy" na "toekomst". Ny eritreritra dia mampifanaraka ny foto-drafitr'asa, mandika ny tranonkala amin'ny fotoana ary manadinadina ny sakana amin'ny vanim-potoana-ary io dia natao tamin'ny alalan'ny lika-saina.
BEWUSTZIJN dia zava-miafina, ny lehibe indrindra sy miafina indrindra amin'ny mistery. Ny teny hoe "fahatsiarovan-tena" (Fitiavana) dia tokana; Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Ny isam-pianakaviana dia tena manan-danja tokoa, saingy tsy misy izany. Ity dia hita amin'ny fomba fiteny izay ampiasain'ny mpampiasa. Ho an'ny ankamaroan'ny fanoratana dia tokony omena ny tolotra ampiasaina: ny fanehoana an-tsoratra dia ny hoe "ny saina", ary ny "olona mahatsiaro"; amin'ny fiheverana ny firenena, amin'ny ankapobeny, ara-tsaina, ara-tsaina, ara-tsaina, ara-tsaina ary ara-tsaina hafa. Ary io dia voalaza fa mahatsiaro ho mahazatra, mahatsiravina sy matanjaka, mafy kokoa ary mihazakazaka, ao anaty ary mampihetsi-po lalandava, ary tanteraka sy tsy misy dikany. Ny lehilahy dia mahafantatra momba ny fisainana sy ny fihenan'ny saina. Etsy ankilany, ny olona iray dia manana ny toetrany na ny famerenana ny fahazoan-dàlana efa nateraka. Ny tena mahasamihafa ny fampiasana ny teny dia maneho amin'ny endritsoratra toy ny: ny fahatsapana ny lozabe, ny fisainana mivaona, ny fiheverana ny saina, ny fahantrana. Ary farany dia miresaka momba ny firenena rehetra, ny tanjona, ny lanjany ary ny fiheverana ny saina. Ny "Bewustzijn" dia voamarina mba hahazoana tsipika, manam-pahaizana manokana. Amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ity boky ity dia mampiasa ny bokotra fanehoan-kevitra mampihetsi-po azy, noho ny, of in. Ny fanamafisana: ny zava-drehetra dia mahatsiaro tena dia Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny esperanto noho ny Izany hoe inona izany, avy amin'ny saina in Ny votoatiny azo atonta printy
Ny fiarovana dia ny endri-pahendrena, fahaleovan-tena. Ny fisainana dia ny zava-drehetra mahatsapa ny zava-drehetra. Ity misterin'ny mysteries ity dia mahazo ny dikany. Raha tsy misy ny fisainana dia tsy misy mahatsapa azy, tsy misy afaka manonona ny heviny ary tsy misy afa-tsy ny sasany, tsy misy ny singa, ny hery na ny tsy fahaiza-miasa. Mbola tsy misy ny fiantohana. Hitanisa ity pejy ity Izy io dia mahazatra, mihoatra. Ary ny fahamendrehana dia ny fiarovana, fa ny zava-drehetra dia miaina ao amin'ny vondrona izay efa misy azy. Tsy azo atao ny misaina. Tsy azo atao ny mivezivezy, na ampiasaina, na amin'ny zavatra hafa sy izay mbola misy azy. Ny fisainana dia tsy vokatry ny zavatra hafa, ary koa tsy misy dikany izany. Tsy azo atao ny mametraka, mamaritra, manaparitaka, manodina, na mandinika, na manova zavatra hafa. Na dia tsy misy aza ny fiheveran-tena ho azy, dia tsy misy ny fiheverana azy: tsy misy ny fiatoana, ny kianja, ny fasiana, ny fiarovana na ny varotra. Izy dia mihoatra ny zavatra rehetra ary amin'ny zavatra rehetra, avy amin'ny natioran'ny natiora ho an'ny Intelligent Intelligent. Ny fihetsiketsehana dia tsy manan-tsahala, toetra na toetra; Tsy misy na inona na inona azo atao, tsy afaka omena anarana. Tsy mety ny manomboka tsy misy azy. Fibebahana IS.
Raha ny marina dia tsy maintsy manoratra ny fomba fiteninao ianao, ao amin'ny fiantsoana olona iray izay mety ho diso fanantenana. Manana ny fahatsapana mety hahafinaritra anao ianao ary afaka mividy izany, raha toa ianao ka afaka mahita izay niantsoana anao. Vage ny fahatsiarovan-tenan'ireo zanany; Efa misy ny fahatsapana ny fahadisoanao. Miantehitra amin'ny fomba tsy miangatra izy ireo, mahasosotra ny zava-drehetra mahavariana amin'ny zava-mahadomelina sy ny tsy fahampian-tsakafo ary ny fahamendrehan'ny lahy sy ny vavy. Ity dia afaka manolotra ny fahafaham-po hifanaraka amin'ny fianakaviana, ny havana, ny ankizy, ny namana; Ny zava-dehibe dia ny fisainana, ny fahamendrehana, ny fisainana, ny fanandramana, ny fananana, ny maso ary ny hery-mba hahatonga azy ireo ho toy izany koa ny hartsverlangen. Na dia tsy misy zavatra hafa aza dia mety ho lasa ny faniriana. Ny valiny dia ny hoe, mety ho voavaha ianao fa tsy voavaha, fa tsy voatery hizara ny fahatsapana ny tsy fahampian'ny Drie-Enig. Eo anatrehan'ny adiresy e-mail, dia ny fahatsapana sy ny fangatahana, ny fandraisana anjara, ny mpitsikilo sy ny mpamaky izay mamela ny Drie-Enig Zelf. I U ianao dia niaro tena, satria ianao, tsy afaka mahazo ny fahalalanao ny fahazoana ny fahaleovan-tena sy ny fahatsapana ny fahaleovantena raha tsy misy ny fahazoana ny anao amin'ny Drie-Enig. Daarom dia mampahatsiahy anao ihany koa. Ianao dia manadino ireo safidy maro izay nahatonga anao ho olom-boafidy tao amin'ity tontolo ity; ary ianao koa dia nizaka ny fahatsaran-tarehy tanteraka sy ny herim-po, izay nahatonga anao ho hentitra dia nahatsikaritra taminao niaraka taminao sy fantany tao amin'ny Permanente World. Raha mila fanampiana ianao dia mampifanaraka ny fampiroboroboana ny fahatsapana sy ny fangatahana ao anaty volom-borona, mba hahafahanao mametraka ny hevitr'ireo mpankafy anao sy ny mpamaham-bolongana hafa indray ny Drie-Enig-Zelf ao amin'ny Permanente World. Amin'ny alàlan'ny sora-baventy, dia efa voafaritra ilay teny hoe "noforonina" sy "zondevaly", ary tsy misy dikany intsony izy io. Miantehitra amin'ny tontolo iainana izay navotsotra, tsy afaka nanapa-kevitra; Azo ampiasaina araka ny fepetra apetraky ny lisansa Creative Commons Attribution-ShareAlike; Mety misy ny fepetra fanampiny mihatra.
Ary tsy tokony hilalao fotsiny izy ireo. Ho an'ny mpampiasa anao dia misy anao. Eo amin'ny sehatra iray na eo an-tampon-kavoana, any amin'ny ala na any anaty ala, any an-tendrombohitra iray, any amin'ny toerana iray, ny zava-mitranga ary ny tena mahafinaritra dia ao aminao. Ny tena marina dia ho voaro amin'ny fiarovana anao ny safidy. Ny mahagaga anao dia ny fahatsapana fa efa ela no niova ianao, fa ny fotoana dia tokony ho hita ihany koa ny fahatsapana ny pneu sy ny fijerena azy ary farany dia mitranga ao an-tokantrano toy ny Drie-Enig.
Tsy hisy zavatra hafa azo atao afa-tsy ny fahafahana miresaka momba ny fahafinaretana. U, ny fiarovana sy ny fangatahana, dia ny mpitsikilo ny anao amin'ny Drie-Enig. Ary ny zava-dehibe indrindra ho anao manokana dia natao ho an'ny roa tonta ny latsakemboka, izay tokony ho efa voatsikera avokoa. Deze lessen zijn:
Inona no tsy ataoko.
Ary raha tsy izany, dia tsy havelanareo hiditra amin'ny toerany izay tsy nety haingana dia haingana dia haingana dia haingana; saingy ao anatin'ny vanim-potoana farany ny lesona.